Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Jämtlands län / Krokom
Krokom waxaa yaal nolol tayo fiican leh, mustaqbal wanaagsan iyo korriimo dhaqaale. Degmada waxeey ku dadaashaa si eey kor ugu qaadi laheyd ineey shirdaha, dadka usoo guuraya degmada iyo dadka usoo dalxiis tago degmada. Intaas waxaa sii dheer in degmada Krokom eey tahay degmo kalluumeysi oo soo jiidato dadka xalxiiska ah xilliyada xagaaga iyo xilliyada qaboobaha.
6,813 kiilomitir oo laba jibaaran
Östersund 21 kiilomitir
Åre 80 kiilomitir
Sundsvall 207 kiilomitir
Waxaa meeshaan yaal dhul dabiici ah, howo nadiif ah, biyo saafi ah iyo dhul baaxaddiisu weyntahay.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Krokom